Global Voices teny Malagasy » “Aza matahotra aterineto”: Midika fanehoan-kevitra ny famoronana · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 08 Avrily 2019 5:52 GMT 1	 · Mpanoratra ONGDD Nandika Liva Andriamanantena
Sokajy: Mediam-bahoaka, GV Mpisolovava
(Marihina fa tamin'ny volana Aogositra 2012 no nivoahan'ny lahatsoratra teny Anglisy)
Fanamarihana: Nosoratan'i Derechos Digitales ny lahatsoratra  nivoaka voalohany tamin'ny teny Espaniôla, ary nadikan'i Silvia Viñas  .
Mampiahiahy hatrany ny famoronana, ny fampahalalana ary ny fisainana amin'ny fomba hafa. Ankehitriny, raha mampitombo ny fantsom-baovao ary manolotra fomba vaovao amin'ny famoronana ny aterineto sy ny teknolojia nomerika dia misy adihevitra maro ateraky ny tombontsoa sasantsasany izay mikasa ny hanakana ny fampiasana malalaka ireo sehatra ireo.
Noho ny vondron'olona mikasa ny hiaro ny tombotsoan'ny fahafaham-pon'ny indostria dia aseho ho toy ny sehatra ho an'ny piraty izay hanimba ny kolontsaina araka ny fantatsika ankehitriny ny aterineto. Misy ny fitsipika amin'ny lalàna novolavolaina toy ny SOPA , ACTA  na TPP  izay natao hiarovana ny maodely ara-barotra mifototra amin'ny rafitry ny fizakamanana miha-voafetra hatrany ary tsy manaja ny zo fototra toy ny fahalalaham-pitenenana sy ny fiainana manokana .
Na izany aza, mandritra izany fotoana izany, nipoitra avy amin'ny fampiasana ny aterineto isan'andro ny etika nomerika vaovao, izay ahitana fampanjakam-bahoaka ny kolontsaina, ny fandefasana hevitra malalaka sy ny fomba vaovao hamoronana ao amin'ny aterineto. Io no etika mampanjavozavo ny sakana eo amin'ny mpanakanto sy ny mpihaino azy; omen-danja ny hevitra, tsy amin'ny alàlan'ny fanakatonana ny fahalalana ho ao amin'ny vondron'olona sangany, fa amin'ny alalan'ny fizarana izany amin'ny vondrom-piarahamonina; ary ahitana ny finoana amin'ny fomba fijery voalanjalanja momba ny zon'ny mpamorona izay tsy miaro fotsiny ireo mpamorona ihany, fa manome toky ihany koa ny fahazoana miditra amin'ny asa famoronana sy ny asa ara-tsaina.
Ity no sehatra ilaintsika hampiasaina sy hokarakaraina ary hoarovana. Izany no antony ilazantsika hoe: “Aza matahotra Aterineto” (#NoTemasaInternet .)
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2019/04/08/136954/